Nubia Red Magic 3: Qeexitaannada, Qiimaha iyo Siidaynta | Androidsis
Nubia Red Magic 3 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Waxaan maqalnay warar badan oo xan ah oo ku saabsan Nubia Red Magic 3 muddo bilo ah. Waa taleefanka cusub ee ciyaaraha ee nooca Shiinaha, oo ah mid ka mid ah moodooyinka la filayo ee qaybtan suuqan. Waxaa jiray warar xan ah oo dhan oo ku saabsan, sida kuwa awoodda batterigaaga ama isaga awooda tartamada kala duwan. Ugu dambeyntiina, ka dib waqtigaan xanta ah oo dhan, taleefanka horay ayaa loo soo bandhigay si rasmi ah.
Marka waxaan horeyba uheysanay dhamaan xogta kujirta casrigaan cusub. Astaantu ma aysan soo bandhigin telefoonno badan sannadkan, in kasta oo aan waxay la baxeen Alpha cusub. Hadda, waxaan ku soo bandhigaan soo jeedintooda cusub qeybta ciyaaraha. Nubia Red Magic 3 waa taleefan loo yeedhay si loo barto.
Naqshadaynta taleefanka, nooca Shiinaha ayaa la yaabay sharad xoogaa dhulka lagu jabinaayo, laakiin taasi waxay sifiican ugu shaqaysaa qaybtaan. Naqshad aad u habboon oo loogu talagalay ciyaaraha. Maxaa intaa ka badan, taleefankan waxaan ka dhex helaynaa taageere. Waad ku mahadsan tahay, kuleylka biraawsarka waa la baabi'iyay. Waxay noqoneysaa taleefankii ugu horeeyay ee suuqa yaala ee adeegsada nidaamkan.
1 Tilmaamaha Nubia Red Magic 3
Tilmaamaha Nubia Red Magic 3
Heer farsamo, waxaan horeyba u aragnay qaar ka mid ah qeexitaanada Nubia Red Magic 3 todobaadyadii la soo dhaafay. A casriga casriga ah, taas oo loo soo bandhigay ikhtiyaar kale oo wanaagsan qeybta ciyaarta. Marka taas la tartami kara Black Shark 2 kaas oo isna la soo bandhigay dhawaan. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Muuqaal: 6,65-inch AMOLED oo leh xallinta 2.340 x 1.080 pixels
Kaydinta: 64/128/256 GB
Isku xirnaanta: GPS, WiFi 802.11 a / c, Bluetooth, USB-C, qalabka dhageysiga
Kuwa kale: Dareenka faraha, taageere gudaha ah
Nidaamka hawlgalka: Android Pie
Nidaamka qaboojinta waa mid ka mid ah awooda Nubia Red Magic 3. Calaamadu waxay sheeganeysaa in mahadsanidiin ay awoodaan taleefanka ku hay 5 darajo oo qabow taleefannada kale ee tartamaya. Muuqaal aan shaki ku jirin inuu muhiim u yahay markaad ku ciyaareyso qalabka, si markaa aad uhesho khibrad isticmaale wanaagsan marwalba.
Si ka duwan taleefannada kale ee dhammaadka-dhamaadka, sumadda Shiinaha ayaa leh sharad ku isticmaal hal kamarad gadaal ah qalabka. Waxaan helnaa dareeraha MP 48. Shaki la'aan, u heellan shidma awood badan, laakiin taleefan kamaraddu aysan ahayn cunsurkeeda ugu weyn. Awood iyo awood u lahaanshaha inuu ciyaaro saacado ayaa ah dhinacyada ugu muhiimsan ee kiiskan. Intaa waxaa dheer, waxaan ka helnay batari awood leh 5.000 Mah. Marka lagu daro processor-ka Snapdragon 855 iyo joogitaanka Android Pie, waxaan leenahay ismaamul wanaagsan oo la hubo.
Sida caadiga ah kiisaskaas, telefoonka ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigay Shiinaha. In kasta oo ilaa iyo hadda aan wax faahfaahin ah laga bixin bilawgeeda caalamiga ah. In kasta oo hubaal dhowaan waxaa jiri doona xog cusub oo arrintan la xiriirta. Maaddaama wax walba ay muujinayaan inaan filan karno tan Nubia Red Magic 3 ee Yurub.
Sidaan ku aragnay soo bandhigidiisa, taleefanku wuxuu ku yimaadaa noocyo kala duwan marka loo eego RAM iyo keydinta gudaha. Markaa isticmaale kasta wuxuu awood u yeelan doonaa inuu doorto nooca Nubia Red Magic 3 ee sida ugu fiican ugu habboon waxa ay raadinayaan kiiskooda. Waxaan horeyba u haysannay qiimaha lagu beddelayo nooc kasta oo taleefanka ah. Kuwani waa qiimahooda:
Nooca leh 6/64 GB wuxuu yeelan doonaa qiimo ku saabsan 385 euro oo la beddelo
Qaabka leh 6/128 GB wuxuu ku kici doonaa qiyaastii 426 euro in la beddelo
Nooca leh / 128 GB wuxuu la yimaadaa qiimo ku saabsan 465 euro in la beddelo
Qaabka leh 12/256 GB wuxuu ku kici doonaa qiyaastii 573 euro in la beddelo
Waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan ka maqalno wax badan oo ku saabsan bilaabitaankeeda caalamiga ah.. Sidoo kale in dhammaan noocyada taleefanka lagu soo bandhigi doono suuqa Yurub iyo in kale. Dareenkan weli ma jiraan wax xog ah. Maxaad u malaynaysaa arrintan Nubia Red Magic 3?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Nubia Red Magic 3 ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay
Abka ugufiican ee lagu raaco natiijooyinka doorashooyinka guud ee 2019 kana soco Smartphone-kaaga
Nintendo wuxuu maalin walba ku sii kordhaa barnaamijyada moobilada. Mustaqbalka shirkada?